Record Desktop sida Video: qabsaday meel kasta oo aad desktop
> Resource > Record > Record Desktop: qabsaday Area kasta oo Desktop
Haddii aad rabto in aad ka heli aalad awood kaa caawinaya in aad u qoraan meel kasta oo ka mid ah shaashadda, waan hubaa DemoCreator waa waxa aad raadinayso. Waxay bixisaa doorashada deegaanka lagu duubo dabacsan marka aad bilowdo si ay u qoraan desktop-ka: Codsiga doorasho si ay u qoraan falalka on daaqad codsiga xushay; Size Custom si ay u qoraan falalka meelaha cayiman shaashadda; Full Screen si ay u qoraan falalka shaashadda oo dhan. Waa kuwee qayb on desktop ah ayaad u baahan tahay si ay u qoraan? Waxay ku xidhan tahay waxa aad rabto si ay u muujiyaan. Waxaa jira qaar ka mid ah xeerarka ay doortaan goobta wax lagu qoro oo aad desktop-ka. Halkan waxaad:
Suuqa kala codsiga Record
Haddii hawlgalka software aad rabto in aad si ay u qoraan waa in mid ka mid uu furmo suuqa iyo waxaa jira sanduuqyada hadal yar ama-pop baaritaan muujinaya ka soo saaray baaxadda wax lagu qoro ee suuqa kala duubo, dooro doorashooyinkan waa ganaax. Sanduuqyada Dialog iyo-pop baaritaanada muujiyaan doonaa oo keliya haddii ay ku jiraan hor iyo ka yar uu furmo suuqa ugu weyn. Wax kasta oo ku koobnayn oo ka baxsan xuduudda ee suuqa ugu weyn waa laga gooyn doonaa. Isku day in aad u ordaan codsigaaga si aad u aragto waxa ay noqon doontaa OK in la sameeyo suuqa kala codsiga sida meesha wax lagu qoro. Sidoo kale maanka ku hayo in size default of filim daabacaadda ee la mid ah sida uu furmo suuqa codsiga aad ku noqon doonaa. Si aad uga dhigto ka ciyaaro meel ciyaareed yar, waxaa lagula talinayaa in ay hoos u soo celin suuqa kala codsiga oo aad sameyso wax lagu qoro. Ama waxaad ka bedeli kartaa aragti daabacaadda sanduuqa goob wada hadal ah. Ka dib markii in, waxaad ku dari kartaa walxaha zoom ka Mozilla in ay xoogga saaraan faahfaahinta ee bogagga resized. Dooro codsiga aad rabto in aad si ay u qoraan on desktop, iyo dhaqso ah in ay, ka dibna waxa aad bilaabi kartaa in aad duubo.
Qor size caadadii
Haddii aad rabto in aad si ay u qoraan qayb ka mid ah hawlaha desktop aad, aad u astaysto goobta wax lagu qoro. Howlgal kasta oo kale oo habaarka mouse iyo keystroke aagga in la qabsan doonaa. Tani waa hab sahlan dhigay gobolka duubo iyo muuqa aad video iyo waxa ay ka dhigi saxda ah ciyaaryahanka ama bogga internetka halkaas oo aad dooneysid inaad tusto filimka. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira qaar ka mid ah dhinacyada pre-set for duubo desktop: 800 * 600, 640 * 480, 400 * 300. Ma qaar ka mid ah carbis lagu duubo si aad u hubiso in aad helayso wax walba oo aad rabto in aad si ay u muujiyaan in ay ka dhacaan gudaha gobolka. Xajmiga saxda ah inaad qortid by in xogta pixels ee laga soo galo goobta, oo aad u soo jiidi kartaa laydi ay u dhig goobta wax lagu qoro.
Diiwaangelinta shaashad buuxda
Doorashadan waxa weeye in aad ka qabsadaan wax kasta oo dhaca shaashadda oo idil. Isbarbardhigga la duubo goobta yar, waxa ay qaadan doontaa ilaa khayraadka computer dheeraad ah iyo in la abuuro file ka weyn. Si kastaba ha ahaatee, in haddii ay jirto ilaaliye xal dhab ahaan sare u duubo shaashad buuxda, oo aad u badan tahay in aadan rabin in la abuuro file video in uu leeyahay in dib loo ciyaaray xal isku mid ah in ciyaaryahan run ahaantii weyn. Haddii ay suurtogal tahay, hoos u screen xal hor inta aanad bilaabin si aad ugu qortid desktop. Tusaale ahaan, haddii aad isticmaasho xal screen ee 1026 * 768 ama wax ka sareeya, waxa aad qabsato karaa xalka sida 800 * 600 oo ma waxaad qoro. Oo haddii aad rabto in ay muujiyaan in ciyaaryahan ka yar sida 640 * 480, aad resize kartaa aragti filimka sida 80% ka mid ah asalka ah. Sidaas aad daabici karo video ah oo aragti ka yar, laakiin waxa laga yaabaa in wax yar kaalmihii u ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ku dari kartaa wax zoom in ay ku weynayn meel dejinta ee desktop aad diiwaan ah si ay u muujiyaan faahfaahinta gaarka ah. Xitaa Waxaad sameyn kartaa ee walxaha zoom oo dhan bogagga duubo aad.
Si loo hagaajiyo qaab your computer ee inta lagu jiro nidaamka screen-qabashada, gaar ahaan marka aad rabto in lagu soo qabto shaashadda computer oo dhan, inaad si fiican u yareeyo lahaa xal shaashadda (tusaale ahaan, aad hoos u dhigi karaan shaashada xal ka 1024 by 768 800 by 600) oo tayo leh midabka.
All oo dhan, mabda 'weyn record screen waa in ay sameeyaan filim geeyo yar si ay u muujiyaan waxa aan doonayaa in aan tuso. Hadda kaliya download DemoCreator iyo raacaan talooyinka si ay u qabsadaan meel kasta oo ka mid ah desktop sida ay baahidaada!